Salel iyo Sanaag Oo Isku Garab Dhacay Iyo Daad-Madheedh 2-1 Ku Jiidhay Saaxil | Salaan Media
Salel iyo Sanaag Oo Isku Garab Dhacay Iyo Daad-Madheedh 2-1 Ku Jiidhay Saaxil
Xulalka Gobolada Salel iyo Sanaag, ayaa galabta ciyaar aad u xiiso iyo xamaasad badani ku dhex martay Garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo ahaa ciyaartii sadexaad ee tartankanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee Hargeysa ka socda.
ciyaartan waxa daawashadeeda ka soo qeyb galay Wasiirka dhalinyaradda, ciyaaraha iyo dalxiiska Mudane Cali Siciid Raygal, Taliyaha ciidanka Booliska Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo boqolaal qof oo u soo daawasho tagay.
Labada ee Salal iyo Sanaag ayaa ciyaarta qaybteedii hore ku soo gabo-gabowday 1-1, la tashi badan oo labada kooxoodba sameeyeen ciyaarta qaybteedii danbe wax goolal ah lama kala dhalin, waxaana sii socday weerar iyo weerar celin, waxaana ciyaartaasi ku soo gabogabowday barbar dhac.
Dhinaca kale Ciyaartii Xulalka Saaxil iyo Daad-Madheedh (Oodweyne) oo iyaduna ahayd ciyaar adag ayaa labadan xul ayaa weerar iyo weerar celis ay ciyaartaas qaybteedii hore ku gabagabowday 1 gool oo ay ku hogaaminayso xulka gobolka Saaxil, halka xulka gobolka Daad-Madheedh aanay waxba keensan.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay labada kooxoodba garoonka ku soo galeen dar-dar cusub waxa u suurto gashay xulka gobolka Daad Madheedh inay dhaliyaan goolkii barbar dhaca.
muddo ka dibna waxa mar labaad xulka Daad Madheedh dhaliyeen goolkii labaad ee u xaqiijiyay inay badiyeen. waxaanay ku soo gabo-gabowday 2-1.
guusha, iyada oo ay ciyaartu ku soo gabogabooday 2-1, oo ay guushu halkaasi ku raacday gobolka Daad Madheedh ee Oodweyne.